Thanks for collecting the information, sister.
တန်ခူးရေ…..ကျေးဇူးပါ။ အဲဒီဒေသတွေမှာ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဘို့ အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီကြရမှာပါ အမှန်ပါဘဲ။ အစိုးရက ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စီမံကိန်းချပြီး လုပ်တာမျိုးဆိုရင် ပိုထိရောက်နိုင်ပါတယ်။ အခုနိုင်ငံတကာက အရေးပေါ်အကူအညီတွေကတော့ လတ်တလော ဒုက္ခနဲ့ အသက်ကို ကယ်ဆယ်နိုင်ဘို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ အဲလို ကယ်ဆယ်တဲ့နေရာမှာလည်း ကျနော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ မလိုအပ်တဲ့ အတားအဆီးတွေကို အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားပေးဘို့လိုပါတယ်။
မရေ.. လှူဖို့နေရာတွေထဲမှာလေ ဂျပန်များပါမလားဆိုပြီး လိုက်ရှာကြည့်တယ်။ ဘယ်နေရာမှ မတွေ့မိဘူး။ Osaka ကနေ ဘယ်သူမှ ဆက်သွယ်လို့မရဘူး။ Tokyo က သူငယ်ချင်းတွေကို မေးကြည့်တော့လည်း အဲဒီလို ဦးဆောင်တဲ့ organizer တွေမရှိဘူး။ တခြားနိုင်ငံက လူတွေကို အားကျတယ် မရယ်.. Credit card ကို ဂျပန်မှာ ကျမတို့ လျှောက်တာ မြန်မာမို့လို့ မပေးဘူး။ ကျောင်းသားတွေဆိုရင် ရတယ်ပြောတယ်။ အဲဒါကြောင့် တိုက်ရိုက် အကူအညီငွေလှူလို့ရမယ့်နေရာကို လိုက်ရှာနေတာ.. အခုတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကသူ့အိမ်ကနေ တဆင့်လှူမယ်ပြောတေ့ာ သူ့ဘဏ်ထဲထည့်ပေးဖို့ စီစဉ်နေတယ်။
သက်ဝေရဲ့ ဘလော့ဂ်ထဲမှာ အညွှန်းလေး ထည့်ထားပါတယ်။ ခွင့်ပြုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မတန်ခူးရေ.. အင်းစိန်က အခုထိ လိုင်းဖုန်းတွေ မကောင်းသေးဘူးမ။ အဲဒါကြောင့် အိမ်နဲ့လည်း အဆက်အသွယ်မရသေးဘူး။ ဦးလေးနဲ့ အဆက်အသွယ်ရတော့မှ အိမ်အကြောင်းပြန်ကြားရတာ။ သတင်းလာမေးတာ ကျေးဇူးပါ မရေ..
မတန်ခူးရေ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေခမျာအဆိုးဆုံးတွေကို ပဲ အမြဲခံ စားရတယ် နော် ဒုက္ခ ရောက်နေတဲ့ မိသားစု တွေလို ပဲထပ်တူထပ်မျှ ကြေကွဲရပါတယ်
နုရေ…Japanမှာလှူလို့ ရသွားပြီနော်..ဦးလေးကတဆင့် အိမ်သတင်းရတော့ စိတ်တော့အေးရတာပေါ့နော်….
တောင်ပြာတန်းရေ...ရှေးဘ၀က ၀ဋ်ကြွေးတွေ အမြန်ကျေပါစေလို့ ….